Nei mafoni emafoni akaita seApple's iPhone 8 Plus uye iyo Samsung Galaxy Note 8 inoshandisa iyo mbiri lens kamera, uye ndeapi mabhenefiti ayo maviri lenzi anopa kana ichienzaniswa neimwe chete? Heano mutsananguri wedu uzere wemaviri lens lens kamera, kusanganisira kuti ndeapi mafoni anoashandisa uye ndeapi eaya maviri-ekuona snappers ari akanakisa ezuva nezuva kutora mifananidzo.
Mumakore mashoma apfuura takaona kuwedzera kwemaviri lens lens kamera, izvo zviri kukurumidza kutsiva imwechete mapfura seyakajairika. Iwo anodikanwa e LG neHuawei aive pakati pevatangi vekutanga mbozhanhare kusvetukira paiyi imaging tech, nepo Apple neSamsung zvino vazvipira kuzvipamhidzira pasi pamalenzi ekamera kune avo ekutanga mafoni
Isu takatoona mamwe mafoni anodhura kubva kuna Honor uye Motorola kuvhurwa nemapatya snappers, pano muna 2017. Izvo zvinoratidza kuti imwechete lensi foni kamera dzinogona kudzikira mberi muna 2018.
Ehezve, kungo nyonganisa zvinhu, mashoma maviri maviri lens kamera kamera akafanana; muchokwadi, ivo vanopa mhedzisiro dzakasiyana uye mabhenefiti kubva kune mumwe nemumwe. Saka iyo iPhone 8 Plus uye Galaxy Note 8 ichagadzira mapikicha akasiyana kubva ku LG G6 uye Huawei P10, kunyangwe zvavo vese vachipa malenzi maviri pachinzvimbo cheimwe.
Heano gwara redu rakazara kune maviri lens foni kamera, kusanganisira kuenzanisa kwemhando dzakasiyana uye ndeipi inogona kuve yakanakira pane zvako zvaunoda.
Tarisa mutungamiri wedu kune akanakisa kamera kamera uye yakanakisa bhajeti smartphone kamera kune vatinofarira mafoni vapfura izvozvi.
Ndeipi yaive yekutanga lens mbiri kamera kamera uye yakave yakakurumbira?
Yekutanga mbiri mbiri lens kamera kamera iyo isu pachedu takaedza yaive HTC Evo 3D, yakatangwa kumashure muna 2011. Zvisinei, ichi chaive chikara chakasiyana zvakanyanya kune vakajairika vakapfura vaviri vatinoona nhasi.
Check out kwedu nhoroondo yekaviri lens kamera tech pfupiso pfupiso yekuti mambozha akauya sei kumitambo malenzi maviri pachinzvimbo cheimwe, kusanganisira kumisikidzwa kwevamwe vedu vatinofarira mumakore maviri apfuura.
Ndeapi marudzi akasiyana eemaviri lens lens kamera, uye ndeapi mabhenefiti / zvinokanganisa?
Zvakawanda zvakapetwa zviviri lens kamera kamera makamera mutambo maalensi anoshanda akazvimiririra mumwe kune mumwe. Mune mamwe mazwi, iwe unogona kuchinjanisa pakati pavo pane nhunzi, kuti uwane dzakasiyana mhedzisiro zvichienderana nezvauri kuedza kutora. Zvichakadaro, mamwe mafoni anoshandisa mapatya lenzi anoshanda pamwe chete, kusimudzira mhedzisiro yemifananidzo.
Izvo zvakati, zvakaringana ese maviri maviri lens kamera inounza iyo 'portrait' maitiro eimwe tsananguro. Izvi zvinoshandisa malenzi ese maviri kutonga kureba kwenyaya yako uye wozogadzira pikicha ine rakaputika-kunze kumashure, kuti iwe uwane imwe yakakomba kudzika-kwemunda. Izvi zvinobatsira chidzidzo chako kuti chimire, kunyangwe mhedzisiro yacho isiri yakakwana nguva dzose.
Heano kuputsika kwedu kwemhando dzakasiyana dzeaviri lens maviri kamera kamera tech, kusanganisira izvo nharembozha dzinovashandisa uye zvakanakira yega yega.
Iyo 3D kutora mifananidzo mbiri lens kamera
Imwe yemashandisirwo ekutanga eemaviri lens smartphone makamera yaive yekugadzira 3D mafoto. Iyi mifanikiso-mitatu yakasikwa nekubatanidza iyo yakaparadzaniswa mifananidzo kubva kuruboshwe uye kurudyi lenzi, kuti ipe yechokwadi kudzika-kwemunda - nenzira imwechete iyo uropi hwako hunoshandisa iyo mifananidzo kubva kuruboshwe uye kurudyi maziso eziso kukubvumidza iwe kutonga madaro.
Aya mafoto e3D ari echokwadi gimmick, kunyange hazvo pasina kuramba kuti ivo vanonakidza dzimwe nguva. Kana iwe uchiziva zvauri kuita iwe unogona kutora mamwe anokatyamadza akajeka mhedzisiro, ayo anonyatso batsira mifananidzo yako kumira.
Ehezve, kuti unyatsoona mhedzisiro sekufungidzirwa, iwe uchafanirwa kutarisa ako mafoto pane 3D kuratidzwa. Zvinoreva kuti ivo kusagadzikana kukuru uye kwakanyanya kusakwanisika kugovana, zvirinani fomu re3D. Kutaura chokwadi, zvese hazvina musoro.
Ndeapi mafoni anoshandisa iyi mhando yeviri lens kamera?
Nekutenda mashoma mashoma mafoni kubva munhoroondo akapa iyi mhando yeaviri lens lens tech. IHTC Evo 3D yaive yakanakisa yekutanga uye yekupedzisira smartphone kuti ishandise iyo 3D mbiri lens kamera uye hatisi kutarisira kuona imwe chero nguva munguva pfupi.
Iyo yekumeso zoom mbiri lens kamera
Pamwe chete neyakajairwa kamera lens, mamwe mafoni anopa yechipiri 'optical zoom' lens iyo inogona kuwana kutarisisa kwepamusoro-kure nyaya, pasina kukanganisa kunaka kwemifananidzo yako.
Yakanaka kwazvo yega yega kamera kamera ine dhijitari zoom ficha, kazhinji inogoneswa nekiniki yeminwe yako pachiratidziri. Nekudaro, zoom yedhijitari inongodyara micheto yemufananidzo wako uye inowedzera saizi yepikisi, kuenzanisa zoom yekuona. Mukuenzanisa, zoom yemaziso inonyatso gadzirisa lens yekamera pachayo, kuti iwedzere chinhambwe pakati pegirazi neiyo sensor. Mune mamwe mazwi, iri gadziriso chaiyo yemahara pane kungoita software yekumanikidza.
Dual lens kamera ine Optical zoom inowanzo shandura pakati pemalensi maviri otomatiki, kana iwe ukaedza uye zoom mukati.
Paunoshandisa zoom yedhijitari, iwo mapikiseli anowedzerwa muhukuru kukudza iyo pikicha. Izvi zvinosuruvarisa zvinoreva kuti mifananidzo yako ichave yakanyanya kukura, iine mapikisheni ega angangoonekwa kune ziso rakashama.
Ne zoom zoom, hapana chikonzero chekuwedzera saizi yepikisi. Izvi zvinoreva kuti hapana kurasikirwa mune zvakadzama mazinga, uchiri kupa maonero epedyo ehurukuro yako. Inobatsira kana iwe ukatora yakawanda yekunakidza kuvaka pazororo.
Mamwe emakera maviri maviri emakamera anopawo yakatarisa-kona maonero neyakajairwa lenzi, inova yakanaka-ye-ese-epasi mamiriro ezvinhu: unogona kusarudza kana iwe uchida kukodzera zvakawanda mumufananidzo wako, kana kutarisisa pane yakanyanya nzvimbo.
Ehezve, kusiyana neDLLRs dzinodhura, iyo zoom zoom pane aya mafoni kazhinji kazhinji haina kukwana. Iwe uchaona kuti mazhinji maviri lens kamera kamera kunze kwe2x Optical zoom, kusanganisira iyo Samsung Galaxy Note 8 uye iyo Apple iPhone 8 Plus.
Heino runyorwa rwema mobiles atakaedza ayo anoshandisa iyo mbiri lens kamera kamera inozvivakira yakavakirwa-mukati me optical zoom. Kudzvanya iyi link kunokuendesa kune yedu-yakadzika kamera ongororo.
Apple iPhone 8 Plus (ichakurumidza kuongororwa)
Apple iPhone X (ichakurumidza kuongororwa)
Iyo yakareba-kona mbiri lens kamera
Neimwe nzira, mamwe maviri malensi makamera anopa yechipiri yakafara-angle snapper. Kufanana neyemaziso zoom makamera, iyi bhonasi lens inopa maonero akasiyana - mune ino kesi, kutora yakawanda nzvimbo mune imwechete pfuti, pane kukuunza iwe padyo nenyaya yako.
Kusiyana neiyo zoom zoom kamera, iwe uchafanirwa kushandura nemaoko pakati peaya maviri lenzi kuti uwane mhedzisiro yaunoda.
Wide-angle lenses ndiyo yakanaka nzira yekupfura inokatyamadza nzvimbo, kana hombe shongwe iyo yaisazogona kukodzera mune yakajairwa nhare mbozha. Iwo anodikanwa eAsus Zenfone 4 anopa 120-degree maonero, kuti iwe ugone kuona zvakada kuwanda mumafoto ako sezvawaigona muhupenyu chaihwo.
Kwete zvakawanda, kutaura chokwadi. Kunyangwe iwe usinga wande kutora Optical zoom sarudzo neaya maviri ma lens kamera, nepo mamwe emeso zoom maviri lens lens kamera zvakare inopawo yakafara-kona sarudzo.
LG mutendi akasimba muhupamhi-kona mbiri malensi emakamera, inonamira pamwe neyakagadzirwa nemidziyo yayo yekutanga kubvira iyo LG G5 muna 2016. Zvisinei, Asus achangotanga chirongwa chayo, muZenfone 4.
Iyo yekubatana mbiri lens lens kamera
Mamwe maviri emakamera emakamera chaizvo ane malenzi maviri anoshanda pamwechete, pane kupatsanurana. Izvi zvinouya nenzira dzakasiyana dzakasiyana. Semuenzaniso, Huawei / Honor anotakura monochrome pamwe neiyo RGB lens lens pane mazhinji emafoni ayo, ayo anofanirwa kuburitsa mafoto ane rakapinza tsananguro achienzaniswa neyechete lens kamera.
Iko kubatsirwa kukuru kweaya maviri lensera kamera ndiko kugona kutora chaiyo yakadzika-ye-munda mifananidzo. Izvi zvinoshandisa malenses ese maviri kuti uchengetedze yako yakapinza uye wobva wawedzera bokeh -style blur mhedzisiro kumashure. Nenzira iyi, chidzidzo chako chinonyatso kumira pachena, kana ichienzaniswa nepfuti dzakatorwa pane imwechete lens kamera.
Izvi zvinowanzozodaidzwa kuti 'portrait mode' uye mazhinji emaviri lens makamera anopa imwe vhezheni yacho.
Kusiyana neiyo zoom zoom kana yakafara-kona mbiri lensera makamera, hapana nzira yekushandura maonero ako nekuchinja pakati pevaviri vanochera. Iwo mabhenefiti saka mashoma.
Nharembozha dzinoverengeka izvozvi dzinotamba mhando iyi yemaviri lens kamera, sezvaunoona mune yedu runyorwa pazasi. Huawei naRukudzo ndivo vaive vekutanga kuiparadzira, nepo Nokia neMotorola vari kusvetukira pane bandwagon.
Motorola Moto G5s Uye
Kudza 8 Pro
Tarisa kumashure nekukurumidza kune kwedu kwakadzika kuenzanisa kweakanakisa maviri maviri lens kamera kamera!